Hogaamiyaasha Midowga yurub waxay la halgamayaan ‘howl aan macquul aheyn’ shir madaxeedka dib u soo kabashada | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Hogaamiyaasha Midowga yurub waxay la halgamayaan ‘howl aan macquul aheyn’ shir madaxeedka...
Hogaamiyaasha Midowga yurub waxay la halgamayaan ‘howl aan macquul aheyn’ shir madaxeedka dib u soo kabashada
Hogaamiyaasha Midowga Yurub ayaa kulan ka yeelanaya Shir Madaxeedka dib loogu nooleynayo Kabashadda Coranviruska, ka dib sedex maalmood oo ay ku qul qulayeen qorshe dib loogu soo nooleynayo dhaqaalahii ka dhashay cudurka faafa ee COVID-19, laakiin gudoomiyaha shirweynahooda udhow-duubista ayaa ku boorriyay in ay sameeyaan hal talaabo oo kama dambeys ah oo ah “howlgalka aan macquul aheyn” .
Charles Michel wuxuu xasuusiyay 27 hogaamiye ee Midawga Yurub in in kabadan 600,000 oo qof ay hada u dhinteen cudurka coronavirus ee aduunka, ayagaana ay ku saleysanaya in ay is garab taagaan dhibaatada qalalaasaha aan horay loo arag.
“Rajadeyda ayaa ah inaan gaarno heshiis Berrito ay tahay in Midowga Yurub uu gutay howsha mid aan macquul aheyn,” ayuu yiri Madaxweynaha Golaha Midowga Yurub oo ka hadlay cashadii seddexaad oo isku xigta oo ka dhacday xarunta shirka ee Brussels. “Taasi waa rabitaankayga qalbiga ah … seddex maalmood oo shaqo la’aan ah.
Hogaamiyayaashu waxay isku khilaafsan yihiin sida loo abaabulo sanduuq soo kabasho balaaran oo loogu talagalay inay ka caawiyaan Yurub inay ka baxdo hoos-u-dhicii ugu xumaa tan iyo Dagaalkii Labaad ee Adduunka, iyo waxa xayiraadda ku soo kordhin kara waddamada ay ka faa’iideysan karto.
Diblomaasiyiinta ayaa sheegay in hogaamiyayaashu ay ka bixi karaan shir madaxeedka oo ay markale isku dayi doonaan heshiis bisha soo socota, laakiin sida ay uga wada ka wada hadli doona saacadihii hore ee Maanta heshiis ayaa wali u muuqda inay macquul yihiin.
Qorshaha Miiska Saaran ayaa waxaa ku jira xirmo 1.8-tiriliyan-euro ah ($ 2.06-trillion) oo loogu talagalay miisaaniyadda muddada-dheer ee EU-da iyo soo kabashada.
750 bilyan oo yuuro oo loo soo jeediyay in lagu aruuriyo sanduuqa dib u soo kabashada ayaa lagu soo qaadi lahaa iyaga oo ku matalaya dhamaan suuqyada caasimada komishanka fulinta ee EU, kaas oo noqon lahaa talaabo taariikhi ah oo isdhaxgal weyn, ka dibna inta badan kuxiraacda wadammada adage ee ku dhuftay badda Mediterranean.
Madaxweynaha Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB) Christine Lagarde ayaa sheegtay inay ku fiicnaan laheyd hogaamiyaasha inay ku heshiiyaan xirmo mucaawimo “han weyn” halkii laga heli lahaa heshiis deg deg ah kharash kasta.
“Sida ugu habboon, heshiiska hoggaamiyeyaashu waa inuu noqdaa mid hami leh marka la eego baaxadda iyo isku xirnaanta xirmada… xitaa haddii ay qaadaneyso waqti yar,” ayay u sheegtay Reuters.
Hadalada Lagarde waxay soo jeedisay inay ku nastay suurta galnimada ficil celinta xun ee suuqyada maaliyadeed haddii shirku guuldareysto, gaar ahaan maadaama ECB ay leedahay 1 tiriliyan euro-oo lagu daray dagaal si ay u iibsato deynta dowladda.
Kooxo “taajir” ah oo ka mid ah dawladaha waqooyiga yurub ayaa riixay intii uu socday shirku lacag aruurinta dib u soo kabashada waxayna raadinayeen in la xadido sida lacagaha loo kala bixiyo udhaxeeya deeqaha iyo amaahda dib loo bixin karo.
Wadahadallada xiisadda, in kasta oo ay weli ka yara gaaban tahay in shir Midowga Yurub ka socda magaalada Faransiiska ee Nice 20 sano ka hor, wuxuu hoosta ka xarriiqay isku dhaca u dhexeeya waqooyiga EU iyo koonfurta.
Raiisel wasaaraha talyaaniga Giuseppe Conte ayaa ku eedeeyay Netherlands iyo xulafadiisa – Austria, Sweden, Denmark iyo Finland – “sirdoonka”.
Mowqifka Raiisel Wasaaraha Holland Mark Rutte wuxuu ka tarjumayaa xaqiiqada siyaasadeed ee dalkiisa, halkaasoo cod bixiyayaashu ka xanaaqsan yihiin in Nederland ay, si isku mid ah, uga mid tahay kuwa ugu badan ee ku deeqay miisaaniyadda EU.
Isaga iyo xisbigiisa muxaafidka ah ee VVD ayaa wajahaya loollan adag xisbiyada midigta fog ee doorashooyinka bisha Maarso.
Isku day la doonayey in lagu gaadho tanaasul ayaa fashilmay Axadii. Heshiis ku kacaya 400 bilyan oo yuuro oo deeq ah – oo hoos uga dhacay 500 bilyan oo yuuro ah – ayaa laga diiday waqooyiga, oo sheegtay inay u aragto 350 bilyan oo yuuro kan ugu badan.
Waxaa sidoo kale jiray khilaafaadyo ku saabsan qaab sharci cusub oo sharciga loo soo bandhigi karo kaasoo lacag la’aan ugu deeqi kara waddammada ka soo baxa mabaadii’da dimoqraadiyadda. Hungary, oo ay taageerayaan Poland, waxay ku hanjabeen inay diidi doonaan xirmada hadii bixinteeda la sameeyay ay kuxiran tahay shuruudihii ka soo baxay ee ku aaddan ilaalinta sharciga.
Dadka qaar, shirku wuxuu ahaa daqiiqad muhiim u ah ku dhawaad ​​70 sano ee isdhaxgalka yurub, iyo ku guuldareysiga in la isku raaco labadaba mideynin suuqyada maaliyadeed waxayna sii hurinayaan shaki ku saabsan mustaqbalka kooxda.
Previous articleMucaaradka Dalka Maali oo ka horyimid Qorshayaasha Urur Gobaleedka ECOWAS ee Ku Saabsan Joojinta Qalalaasaha Siyaasadeed ee ka Taagan Dalka Maali
Next articleDF Oo Faah-Faahin Ka Bixisay Saameynta Ay Fatahaaddu Ku Yeelatay Sh/Hoose
Xildhibaanadda Baarlamaanka Maamulka Somaliland oo ku Baaqay Joojinta Dagaalka Buuhoodle